Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » El Al waxay dib u bilaabaysaa Budapest duulimaadkii Tel Aviv
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Hangari News • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dib-u-furitaanka xiriirkeeda u dhexeeya Budapest iyo Tel Aviv maanta, El Al wuxuu ku shaqeyn doonaa afar jeer adeeg toddobaadle ah oo ku saabsan 2,165km.
El Al wuxuu ku laabanayaa Gegida Diyaaradaha ee Budapest.
Markab sidda calanka Israa’iil ayaa dib uga bilaabay adeegyada Tel Aviv magaalada Budapest.
Duulimaadyada Budapest-Tel Aviv waxay shaqeyn doonaan afar jeer toddobaadkii.
Dib -u -bilaabista shabakadda marinka garoonka Budapest waxay sii socotaa soo noqoshada lamaanaha duulimaadka albaabka Hungarian, El Al Airlines.
Dib -u -furidda xiriirkii Tel Aviv, markabkii calanka Israel ayaa mar kale si weyn u ballaarin doona howlaha garoonka ilaa dalka Bariga Dhexe.
Dib-u-furitaanka xiriirkeeda u dhexeeya Budapest iyo magaalada oo ku taal xeebta badda Mediterranean-ka maanta, xamuulku wuxuu ku shaqeyn doonaa afar jeer adeeg toddobaadle ah oo ku saabsan qaybta 2,165km.
Balázs Bogáts, Madaxa Horumarinta Diyaaradaha, Madaarka Budapest ayaa yiri: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan aragno El Al soo noqoshada - Budapest waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee socdaalayaasha Israa’iil, sidaa darteed waxaan ognahay in adeeggan uu noqon doono mid aad loo dalbado. Budapest waxay leedahay beel weyn oo Yuhuud ah, runtii, Sinagogga Weyn ee Budapest waa sunagogga labaad ee ugu weyn adduunka. Sidaa darteed, waxaan ku kalsoonahay in adeegsiga El Al ee dib uga soo laabashada Tel Aviv uu noqon doono mid caan ku ah dalxiisayaasha iyo socdaalayaasha booqanaya saaxiibbada iyo qaraabada. ”
El Al Israel Airlines Ltd. waa side calanka Israel. Tan iyo markii duulimaadkeedii ugu horreeyay laga bilaabo Geneva ilaa Tel Aviv Bishii Sebtember 1948, diyaaradda ayaa koray si ay ugu adeegto in ka badan 50 goobood, iyadoo ka shaqeyneysa jadwalka adeegyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah iyo duulimaadyada xamuulka ee Israa'iil dhexdeeda, iyo Yurub, Bariga Dhexe, Ameerika, Afrika, iyo Bariga Fog, oo ka soo jeeda saldhigeeda ugu weyn ee Ben Madaarka Gurion.